Archive du 20180228
Hetra sy raharaham-pitsarana Hovizanina tanteraka Ravalomanana
Manahiran-tsaina ny mpitondra ankehitriny sy ireo mety ho mpifanandrina aminy i Marc Ravalomanana amin’ny fifidianana. Sarimihetsika fotsiny ny resaka gafigafy atao amin’ny hafa fa ny zava-misy rehetra kosa dia maneho fa i Marc Ravalomanana sy ny antoko TIM aloha no tena laharam-pahamehana ny famotehana azy.
Gidragidra amin’ny fifidianana Efa mandindona sahady
Na ny avy eo anivon’ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana (CENI) sy ny komitin’ny fampihavanana malagasy (CFM) aza dia efa samy niaiky nanomboka ny fiafaran’iny taona 2017 iny fa mbola volana maro hahatongavana amin’ny tena fotoam-pandatsaham-bato dia efa mafampana sahady ny toe-draharaha ka nahatonga azy ireo niantso fitoniana.
Paul Rabary Miomana ho kandida filoha ?
Maro ny mpanao politika sy olom-pirenena mihevitra fa mety ho kandida filoham-pirenena ny minisitry ny fanabeazam-pirenena Paul Rabary, raha tarafina amin’ny fihetsiny.
Lisi-pifidianana 9 767 098 ireo mpifidy voasoratra anarana
9 767 098 ny isan`ny mpifidy voarakitra ao anatin`ny lisi-pififidianana manerana ny distrika 119 raha ny tarehimarika azo teo anivon`ny Vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana ka miisa 217 103 no niveimberina nandritra ny fanadiovana ny lisitr`ireo mpifidy.
Taratasin’i Jean Aza mifamingana !
Miarahaba anao aho ry Jean ! Inona no malaza any aminao any ? Tena leo be an’ity vorivory … efa hainao ny tohiny lava ity aho aa ! Fotoana tokony hahavitana asa mivaingana ve rangahy tonga dia hampidongizinanareo ao anaty rindrina efatra ao fotsiny.
Mpandraharaha Sinoa Maro no hangoron’entana…
Leo ny antsojay amin’ny alalan’ny fitakiam-bola tsy ara-drariny ataon’ny olona ambony eto amin’ny firenena ny mpandraharaha sinoa sasany, ka maro no mety handao an’i Madagasikara.
Minisiteran’ny fitsarana Tompon’andraikitra ambony 4 nesorina
Azo itarafana ny savorovoro misy eo amin’ny fitantanana ny firenena ireo fanapahan-kevitra noraisina omaly hariva nandritra ny filankevitry ny minisitra notanterahana teny Iavoloha.
Mpanondrana devizy tra-tehaka Arovan’ny mpanolotsaina sy ny zanaky ny filoha ?
Tovolahy iray 27 taona antsoina hoe Ntsay Kevin no sarona nitondra vola vahiny tsy ara-dalàna teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato ny 14 febroary 2018.
Taksibe mihodina an-dalana Mety hiafara amin’ny fisintonana “permis”
Mitombo isa hatrany ireo taksibe mihodina an-dalana amin’izao. Tsy vitsy ireo tonga eny amin’ny antsasa-dalana dia miverina, mamindra mpandeha tsotra izao amin’ireo namany hafa ny sasany.
Mpitatitra miazo ny RN 4 sy RN 6 Hifindra etsy Andohatapenaka rahampitso
Hifindra etsy Andohatapenaka manomboka rahampitso Alakamisy fiandohan’ny volana Martsa ireo mpitatitra miazo ny lalam-pirenena fahaefatra sy fahaenina miantsona etsy Ambodivoina.
RASOARINIRINA Fanomezantsoa Miorda, Mila tolo-tanana maika
Zazavavy kely vao teraka tamin’ny 28 janoary lasa teo tany Ambodiangezoka Andapa Rasoanirina Fanomezantsoa Miorda.
Harena ankibon’ny tany sy solika Hisy fampirantiana lehibe ny 13 , 14 ary 15 aprily
Hotontosaina etsy amin’ny Mining business center Ivato ny 13 ka hatramin’ny 15 aprily izao ny tranoben’ny harena ankibon’ny tany sy ny solika ary ny fampitaovana ilaina aminy izay hiarahan’ny orinasa Media consulting miasa amin’ny fitondram-panjakana.
Fandoavan-ketra Malaina ny Malagasy
Manodidina ny 12% ny tahatsindrin-ketra afakaratsaka (taux de pression fiscale) eto Madagasikara. 20% monja ny tahan’ny fahazoana hetra (taux de recouvrement fiscal) eny amin’ny kaominina araka ny tarehimarika eny amin’ny sampandraharahan’ny hetra.
Fahatsiarovana an’i Johnny Hallyday Seho tsara lamina sy matihanina ny zoma ho avy izao
Ny zoma ho avy izao no hotanterahina etsy amin`ny Dome RTA Ankorondrano ilay hetsika fahatsiarovana an`i Johnny Halliday, ilay andrarezina nitondra rivo-baovao teo amin`ny sehatra ny mozika frantsay. Hiavaka tokoa ny hetsika satria mialohan`ny fampisehoana dia hisy filaharana moto ``Harley Davidson`` marobe izay hiainga avy amin`ny Marais Masay izay hizotra any amin`ny Dome RTA.